बिगबोस १३ मा स्टङ् कन्टेस्टेन्ट्समा शुमार रश्मी देसाई टिभीकी हाईएस्ट पेड नायिका पनि हुन्। रश्मीलाई विशेषगरी टिभी सीरियलमा देख्न सकिन्छ। तर, धेरैलाई था...
सुमधुर स्वरका लागि चिनिने जेम्स् प्रधानले टुबोर्ग ओपन सेसन्स् सिजन २ मा आफ्नो लोकप्रिय गीत ‘आईदेऊ आईदेऊ’ को लाईभ प्रस्तुती पेश गरेका छन् । ...
बलिउड नायिका नीना गुप्ता अभिनयका कारण आज पनि चर्चित छिन्। उनले बलिउडमा लामो यात्रा गरिन्। तर, उनको प्रोफेशनल र व्यक्तिगत जीवन उतार चढावमा रह्यो। नी...
गायक प्रमोद खरेलले आस्था राउत प्रकरणबारे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सोमवार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले आस्था राउतले फेसूकक लाइभमा अस्वभाविक अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् । 'गएको केह...
फिटनेशमा बलिउडका नायिकाहरु निकै ध्यान दिने गर्दछन् । उनीहरु फिट हुनका लागि जे सुकै उपाय अबलम्बन गर्न पनि पदैनन्। बलिउडका प्राय अभिनेत्रीको दिनको सुरुवात योगाबाट हुने गरेको छ। जसका कारण पनि उनीहरु सबैको ...
हिट फिल्मको खोजीमा शाहरुख, अपोजिटमा करीना !
बलिउड अभिनेता शाहरुख खान पछिल्लो समय हिट फिल्मको खोजीमा छन् । शाहरुखले खेलेका पछिल्ला फिल्मले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न सकेका थिएनन् । यतिबेला उनी एकप...
गायिका आस्था राउतलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले राउत विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिए...
सम्पर्कमा नआएपछि गायिका आस्था राउतलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा प्रहरी
प्रहरीले गायिका आस्था राउतलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालयकी प्रवक्ता उवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) किरण बज्राचार्यले राउत सम्प...
आगामी २७ जनवरीमा ६२ औँ ग्रेमी अवार्ड्स आयोजना हुँदैछ। अवार्ड आयोजनाको केही दिन अघि आरियाना ग्रान्डेमाथि लिरिक्स चोरीको आरोप लागेको छ। ग्रान्डे अमेरि...
विमानस्थलमा आस्थाले के गरेकी थिइन् ? हेर्नुहोस् EXCLUSIVE VIDEO
गायिका आस्था राउतले बिहीवार फेसबूक लाइभमार्फत प्रहरीलाई निकै तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दै गाली गरिन् । यतिसम्म कि तल्लो तहका अर्थात् प्रहरी जवानलाई त अनेक भनिन् । उनल...
बारम्बार धर्म परिवर्तन गर्ने सेलिब्रेटीको नालीबेली
धर्मकर्मका कुरा यसै पनि संवेदनशील मानिन्छन्। त्यसमाथि धर्म परिवर्तनलाई ठूलै इस्युका रूपमा लिने चलन छ। यद्यपि, कुन धर्म मान्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको निजी आस्था र...
चर्चामा दीपिकाको रेट्रो लुक
बलिउड नायिका दीपिका पादुकोण अहिले आफ्नो फिल्म ‘छपाक’ को प्रमोशनमा छन्। फिल्म १० जनवरीदेखि फिल्म हलमा लागिसकेको छ। र, पादुकोणले खुब प्...
उडानमा बलिउड नायिकामाथि याैन दुर्व्यवहार गर्ने व्यवसायीलाई तीन वर्ष कैद
बलिउडकी पूर्वनायिकामाथि विस्तारा एयरलाइन्सकाे विमानकाे उडानकाे क्रममा याैन दुर्व्यवहार गर्ने व्यवसायीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। भारतको विश...
कपिल शर्माले सार्वजनिक गरे छोरीको तस्वीर
कमेडियन कपिल शर्मा र उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ आजकल निकै खुशी छन् । मंसिर २४ गते उनीहरू छोरीका मातापिता बने । कपिलका प्रशंसकहरू उनकी छोरी...
रहेनन् वरिष्ठ गायक भट्टराई
वरिष्ठ गायक निशान भट्टराईको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएको छ । सोमबार राति दरबारमार्गस्थित वानथाई रेष्टुरेन्टमा आफ्नो नियमित गायन सकेर निवास फर्कदै...
यी चर्चित गायकलाई चुम्बन गरिन् नायिका किमले
बलिउड अभिनेत्री किम शर्मा पछिल्लो पटक चर्चित गायक विशाल ददलानीसँग देखा परिन्। यी तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए। किमका फ्यानहरुको प्रश्न छ, किम वि...
मलाई स्कर्ट असाध्यै सुहाउँछ : रेखा थापा
अभिनेत्री रेखा थापाले आफूलाई स्कर्ट लगाउँदा सुहाउने बताएकी छन् । रंग पत्रकार डिबी खड्काद्वारा लिखित 'नियत' पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिने...